भूकम्पको ६ वर्षपछि गोरखा दरवारको छाना छाइदै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १६ असार २०७८, बुधबार १६:२७
भूकम्पको ६ वर्षपछि गोरखा दरवारको छाना छाउने काम शुरु भएको छ । दरवारको अन्तिम तलामा छाना छाउने काम थालिएको गोरखा दरवार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ।
‘दरवारको बाहिरी संरचनाको काम लगभग सकिन लाग्यो,’ अड्डा प्रमुख हरि भुसालले भने, ‘अन्तिम तलामा छाना छाउने काम केही दिनमा सकिन्छ ।’ १३ जना दक्ष कालिगढबाट काम भइरहेको र असार मसान्त सम्ममा बाहिरी काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि नै पुनर्निर्माण भइसक्नुपर्ने गोरखा दरवारको हालसम्म ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुगेको गोरखा दरवार पुननिर्माणको काम २०७४ सालबाट शुरु भएको हो । ठेक्का सम्झौता अनुसार दुई बर्षभित्रै काम सक्नुपर्थ्यो । तर ठेकेदारको लापरवाहीले हालसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
तीन पटक थप भएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीलाई पुरातत्व विभागले कारवाही गरेको छ । कारवाही स्वरुप गत पुष १ गतेबाट लागू हुने गरी ठेक्का सम्झौता रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतले जरिवाना तोकिएको विभागका साइड सुपरभाइजर नारायण बोहोराले बताए ।
दरवार पुननिर्माणका लागि करीब पाँच करोडमा पचली भैरव सिभाको जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । तेस्रो पटक थप भएको म्याद अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सक्नुपर्थ्यो ।
म्याद सकियो तर अझै काम सकिएको छैन । तेस्रो पटक थप भएको म्याद बारे कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको गोरखा दरवार हेरचाह अड्डा प्रमुख भुषाल बताउछन् ।
गोरखा दरवार पुननिर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सँगै रहेको कालिका मन्दिर र रंगमहल भवन पुननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पुगेका उक्त संरचनाहरु प्रवलिकरण गर्ने निर्णय भएको छ । तर दरवार पुननिर्माण सम्पन्न नहुँदा काम शुरु गर्न नसकिएको दरवार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।
‘सामान भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, दरवार बनेको भए त्यहा भण्डारण गरेर कालिका मन्दिर र रंग महलको भवन प्रवलीकरण शुरु गर्न हुन्थ्यो,’ हेरचाह अड्डा प्रमुख भुषालले भने ।
भूकम्पले क्षति पुगेका उक्त संरचनाहरु जगैदेखि भत्काएर पुननिर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने भन्ने अन्योलता थियो । तर दरवार पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवलिकरण गर्ने निर्णय गरिएको भुसाल बताउँछन् । ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ । उक्त संरचनाहरु प्रवलीकरणका लागि चालु आर्थिक बर्ष ५०-५० लाख रकम विनियोजन भएको बताइएको छ ।
गोरखा–आरुघाट सडक खण्डको ढुङ्गागाढे खण्डमा सवारी साधन घण्टौँ हिलोमा फस्ने गरेको छ । बिहिवार उक्त